Sida Loo Daro Hawl Gelinta Istaraatiijiyadda Qalabaynta Suuq Gelinta | Martech Zone
Sideed u geyn kartaa istiraatiijiyad otomaatig ah suuq geyn guul leh? Ganacsiyo badan, tani waa su'aasha milyan (ama ka badan) dollar ah. Waana su’aal aad u fiican in la isweydiiyo. Si kastaba ha noqotee, marka hore waa inaad weydiisaa, maxaa loo kala saaraa a istaraatijiyad otomaatig suuq geyn guul leh?
Waa maxay Istaraatiijiyadda Qalabaynta Suuqgeynta guuleysta?
Waxay ku bilaabmaysaa a goolka ama himilooyin. Waxaa jira hadafyo yar oo muhiim ah oo kaa caawinaya inaad si cad u cabirto isticmaalka guuleysta ee otomaatiga suuq geynta. Waxaa ka mid ah:
Istaraatijiyadaha Qalabaynta Suuqgeynta ee guuleysta waxaa ka mid ah Kordhiyo in:
wadeenka jiilka led
Istaraatijiyadaha Qalabaynta Suuqgeynta ee Guusha leh a Hoosudhaca in:
Fursadaha iibka oo lumay
Xitaa ka fiirsashada hadafyadan ballaaran ee aad ku guuleysan karto, soo dejinta istiraatiijiyad otomaatig ah oo suuq-geyn guul leh lama hubo.
Qeexida Istaraatiijiyada Qalabaynta Suuqgeyntaada
Waxaan ka fekeray 20 + tusaalooyin otomaatigga suuqgeynta ee aan ka caawiyey keenista iyo waxa kuwa ugu guuleystey ay wadaagaan. Waxaan ka helay laba shay oo isku mid ah oo ku saabsan dhammaan istaraatiijiyado otomaatiga suuq geynta guuleysta ee aan qayb ka ahaa: maareyn hoggaamineed oo wax ku ool ah iyo maktabado maaddo adag leh.
Maareyn hoggaamineed oo wax ku ool ah waa qayb ballaadhan oo ka mid ah otomaatigga suuqgeynta sidaa darteed waxaan ku kala jabin doonaa meelaha muhiimka ah ee maareynta hoggaanka kaas oo ka caawin doona ganacsi kasta inuu helo guul uu ku faafiyo otomaatiga suuqgeynta. Si loo bilaabo, iibka iyo suuqgeyntu waxay u baahan yihiin inay isu yimaadaan si loo qeexo hoggaanka. Wanaagsan, qeex hoggaamiye ka kooban noocyo qeexitaanno ama shaqsiyeed. Maxay yihiin qiyamka muhiimka ah ee tirakoobka dadweynaha / firimikada ee ka kooban hoggaanka?
Sameynta heerarkaaga hoggaaminta waa ku xiga. Tani waxay noqon kartaa mid fudud sida marxaladaha hoggaanka dhaqanka sida MQL, SAL, SQL, iwm. Ama, shirkaddu waxay abuuri kartaa qeexitaanno masrax hoggaamineed caadiya oo si sax ah u tilmaamaya tallaabooyinka u gaarka ah macaamiishooda habka iibsiga.
Kadib, qeexitaanka hogaaminta iyo heerarka, waxaad dooneysaa inaad khariiddo waxyaabaha jira ee marxalad kasta oo hogaamineed. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad fuliso kobcinta leedhka iyadoo kuxiran heerka marxaladda uu ku jiro leedhka. Halkani waa meesha maktabadda mawduucyada adagi ka ciyaaraan. Adoo haysta waxyaabo aad u fara badan oo lagu wadaago dhammaan qeybaha kala duwan ee iibka, qalabaynta suuqgeynta ayaa leh ujeedo. Haddii aanad lahayn maktabad wax ku ool ah, wax yar ayaad odhan doontaa ama la wadaagtaa qiime kasta.
Abuuritaanka Barnaamijkaaga Korinta Nuujinta
Ku soo noqoshada kobcinta hogaaminta, qeexida iyo abuurista barnaamijyada kobcinta hogaaminta waa talaabo muhiim ah oo lagu hirgaliyo otomatiga suuq geynta si guul leh. Talaabooyinka lagu qeexayo heerka hogaaminta / hogaaminta ayaa door muhiim ah ka ciyaara halkan taas oo ah sababta aan ugu xusay, laakiin barnaamijyadaada kobcinta hogaaminta ayaa ka dhigi doona ama jebin doona maalgashigaaga otomaatiga suuq geynta.
Barnaamijyada kobcinta macdanta `` lead '', waxaa si aad ah loogu talinayaa in la abuuro jaantus ka mid ah barnaamijyada kobcinta macdantaada si ay gacan uga geystaan ​​dhismaha dariiqooyinka nafaqeynta, qeexida waxyaabaha kiciya ee lagama maarmaanka ah, aqoonsashada dulduleelada waxyaabaha jira iyo isku dubaridka mas'uuliyadaha iibka & suuqgeynta. Adiga oo abuuraya isla markaana dib u eegis ku sameeya jaantuskan daneeyayaasha ah (tusaale kooxaha iibka iyo suuqgeynta), waxaad isugu imaan kartaa ololeyaal wax ku ool ah, xallinta khilaafaadka ka dhalan kara iyo inaad xilal u dhiibato inta lagu jiro ololaha sida loogu baahan yahay.
Si aad si hufan ugu kobciso hogaaminta, si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelan karto inaad ku soo gudbiso waxyaabaha ku habboon waqtiga saxda ah. Haysashada maktabad nuxur leh oo xoog leh iyo khariidadeynta heerarka hoggaaminta kuma filna. Haysashada otomaatigga suuqgeyntaada keenista gudbinta waxyaabaha laxiriira waxay kuxirantahay abuuritaanka xeerar ganacsi caqli gal ah oo si otomaatig ah u baabi'iya waxyaabaha laxiriira howlaha gaarka ah ee hogaanka.
Si qoto dheer ayaad ula socon kartaa nashaadaadka hoggaaminta oo aad u abuuri kartaa ololeyaal kobcin hoggaamineed oo ka jawaabaya siday u kala horreeyaan tirada dadka + noocyada waxqabadka, sida ugu guusha badan ee aad ula macaamili doonto otomaatiga suuqgeynta. Kordhinta leedhka ballaaran ee diirada lasaarayo waxay yeelan doontaa ugu yaraan (haddii ay jirto) soo noqosho togan. Kordhinta hogaaminta aadka loo bartilmaameedsanayo iyadoo la adeegsanayo kala soocida xogta horumarsan iyo waxyaabaha qiimaha leh, ee laxiriira waxay u abuureysaa khibrado macno leh hogaamiyaashaada ugu dambeyntiina waxay kaa caawineysaa inaad kudhacdo yoolka (yo) suuq geynta otomaatiga ee aad asal ahaan qeexday.
Qaybinta Hogaaminta Suuqgeyntaada
Iyadoo Natiijooyinka Net-ka Suuqgeynta Qalabka, Waxaan ku faaneynaa inaan heysano qeybta ugu wanaagsan ee xogta iyo hogaaminta aaladaha kobcinta ganacsiga. Bixinta farriinta aadka loo bartilmaameedsaday ee leh waxyaabaha ku habboon waa halbeegga cusub ee dhammaan ololayaasha suuq-geynta waxaanna taas uga fududaynay suuqleyda inay ku sameeyaan Natiijooyinka Net-ka. Waxqabadkayaga qaybinta ayaa udub dhexaad u ah Natiijooyinka Net-ka waxayna kaa caawineysaa inaad hagto barnaamijyadaada kobcinta hoggaaminta ee ka mid ah howlaha otomaatigga ah ee suuqgeynta muhiimka u ah sida dhibcaha hoggaanka, digniinta degdegga ah, warbixinta iyo inbadan.
Waad abuuri kartaa xeerar qotodheer oo kala-goyn ah si aad u bilawdo olole kasta oo nafaqayn ah isla markaana laan kasta oo ka mid ah ololuhu ay awood u leedahay isla mishiinka wax kala qaybinta, kaas oo u oggolaanaya boqollaal isku-dhaf ah qaybaha si caqli leh oo si fudud ugu dhaqaajiya tilmaamaha iyada oo loo marayo nidaamka waxbarashada iyo iibsiga.
Tags: hoos u dhig iibka lumayhoos u dhig suuqgeyntahoos u dhig wareegga iibkageeyo otomaatiga suuq geyntakordhinta dakhligahagaajinta barbaarintaistiraatijiyad barbaarinsuuq-geynta suuqaqaybinta otomaatiga suuq geyntaistaraatijiyad otomaatiga suuq geyntahogaamiyayaal uqalmafursadaha iibkawax soo saarka iibka
Michael waa Agaasimaha Suuqgeynta ee Natiijooyinka Net-ka. Michael waa hal-abuurnimo, istiraatiijiyad iyo hal-abuurnimo Teknolojiyad Suuq geyn ah oo ku guuleysta guusha isagoo aqoonsanaya qaababka, soosaarida xalal hal abuur leh iyo ka faa'iideysiga tikniyoolajiyadda ugu casrisan si loo dhiso wacyiga sumcadda ee taageerada suuq-geynta iyo yoolalka iibka.
Soo-dhaweynta Caanka ma yihiin ikhtiyaar suuqgeyn la adeegsan karo?
Sep 4, 2015 at 7: 56 AM
Jacaylka aad ku sheegayso jaantuska qulqulka ee maqaalkaaga Michael! Waxyaabahani way sii murgi karaan oo waxaan u arkay inay gabi ahaanba muhiim yihiin. Gaar ahaan haddii aad isticmaaleyso qalab sida Hubspot ah oo aysan jirin matalaadda masaska aad dhiseyso.
Sep 29, 2015 at 12: 13 PM
"Markii aad si qoto dheer u la socon karto nashaadaadka hogaaminta isla markaana aad abuuri karto ololeyaal nafaqeyn hogaamineed oo ka jawaabaya sida ay u kala horreeyaan tirada dadka, + sida aad ugu guuleysaneyso qalabaynta suuqgeynta." Jeclow tan oo aan wax badan ku heshiin karin.
Mike ma xiiseeyaa inuu maqlo sida aad u qeexdo una isticmaasho "Waxqabadka Lead" iyo "Waxqabadka Dajista" si loo horumariyo ololeyaal nafaqeyn oo ku habboon?
Jan 21, 2018 saacadu markay ahayd 11:34 PM
Maqaal weyn Michael! Dejinta istiraatiijiyad otomaatig ah oo suuqgeyn wanaagsan ayaa hubaal ah aasaaska guusha sannadaha soo socda
Jun 20, 2021 saacadu markay ahayd 6:04 AM
Maqaalkani waa mid indhaha u furaya istaraatiijiyadda otomaatiga suuq geynta.